Ny fanamarinana Oppo Reno 2 Bluetooth dia manambara ny sasany amin'ireo famaritana azy Androidsis
Ny daty fandefasana ny maodely Oppo Reno 2 telo izany no hatolotra eny an-tsena. Rahampitso izy ireo dia hanao ara-dalàna ho toy ny terminal mampanantena, ary zazalahy, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nahalala betsaka momba ireo finday ireo isika, na ny variant mahazatra, fa noho ireo maodely rehetra tsy nahafahanay nanambara izay nomaniny ho anay.
Hanambara bebe kokoa na hanamafy izay Oppo reno 2 hanolotra antsika ny afovoany, efa navoaka ny fanamarinana Bluetooth. Ao amin'ny lisitry izany dia azonao atao ny mahita ny sasany amin'ireo pitsopitsony momba ity fitaovana ity, ary hiresaka momba izany eto ambany izahay.
Fakan-tsary Oppo misy ny maodely 'CPH1907'. Na dia tsy misy aza ny fanamafisana fa io no terminal an'ny andiany Reno 2, dia inoana fa io no fiovana iraisampirenena iray amin'ireo finday ireo. Nahazo fankatoavana avy amin'ny rafitra fankatoavana Bluetooth SIG izy, izay nanambarana ny sasantsasany amin'ireo famaritana azy manokana.
Araka ny nambaran'ny rafitra mpanara-maso ao amin'ny tahiry, ny smartphone dia manohana Wi-Fi Bluetooth 5.0 sy tarika roa. Voamarika ihany koa fa ny Snapdragon SM7150, izay anarana anatiny an'ny Snapdragon 730G ary izany dia miaraka amina fakantsary selfie 16 megapixel, ary koa fananganana fakan-tsary quad izay misy sensor 48 MP, solomaso 8 MP, sensor 13 MP ary solomaso 2 MP. Ireo specs ireo dia mifanandrify amin'ny spec Reno 2 izay niseho tamin'ny tatitra vao tsy ela akory izay. Noho izany, azo lazaina fa ny CPH1907 dia mety ho ny laharana iraisampiren'ity smartphone ity.
Araka ny hita ao amin'ny horonan-tsary mihantona eto, ity fianakavian'ny finday ity dia hifantoka betsaka amin'ny faritra an-tsary, ary mainka ny fizarana video.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fanamarinana Oppo Reno 2 Bluetooth dia manambara ny sasany amin'ireo famaritana azy
Samsung Galaxy J5 (2017) dia mahazo fanavaozana Android Pie miaraka amin'ny Samsung One UI